musha More Yakasanganiswa Martial Artists Bio Gilbert Anopisa Utwana Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Iyo Biography yaGilbert Burns- UFC Fighter.
Yedu Gilbert Burns Biography inotsanangura nhoroondo yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu Hwemhuri, Hupenyu Hupenyu (Wife), Vana, Mukoma, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, tinokupa chinyorwa chinonakidza cheHupenyu Hwake Hupenyu kubva paakange ari mudiki kusvika panguva yaakakurumbira.
Ehe, iwe ungangodaro wakamuziva iye apo gwara rake rakayambuka neiyo ye Kamaru Usman. Nekudaro, havasi vazhinji vakaverenga yedu Biography yaGilbert Burns iyo inonakidza kwazvo. Pasina kutambisa nguva yakawanda, ngatitangei.
Gilbert Anopisa Nyaya Yevacheche Nyaya:
Kune bio kutanga, ane mazita akazara Gilbert Alexander Pontes Burns uye anonzi 'Durinho'. Murwi weUFC akazvarwa pazuva rechimakumi maviri raChikunguru 20 kuNiterói muRio de Janeiro, Brazil.
Burns ndiye wechipiri pavana vatatu vakazvarwa kunze kwemubatanidzwa pakati paamai, Tania uye kuna baba vake, Herbert Sr.
Gilbert Burns Mhuri Yakatangira:
Ehe, iyo katatu World Champion inyika yeBrazil asi iwe unoziva nezve iyo nhanho iyo matende emidzi yeimba yake anotambanudzwa?
Mhedzisiro yekutsvagisa mhuri yeGilbert Burns inoratidza kuti ine midzi yechiPutukezi neAfrica.
Mukombe weWorld Cup menduru yegoridhe akakurira kwaakaberekerwa kuNiteroi, Rio de Janeiro pamwe chete nemukoma wake, Frederick nemunin'ina wake, Herbert Jr.
Waiziva here kuti Gilbert aingova nemwedzi mitanhatu chete paakatanga kurwisana nechirwere chemapapu?
Gilbert mudiki aisava ega muhondo iyi. Munun'una wake akarwara nechirwere zvakare uye ivo vaviri vaifanira kuendeswa kuchipatara kakawanda nekuda kwepfuti dze adrenaline.
Gilbert Anopisa Inhoroondo Yemhuri:
Pano, tinoita kuti ujairane naamai nababa vaDurinho vake.
Apo mumwe chiremba akakarakadza kuti vabereki vaGilbert Burns vanofanira kusaina iye naHerbert Jr nokuda kwemitambo kuti vabetsere mumugariro wavo, vabereki vake veboka rapakati nepakati pakarepo vakafunga kuvanyoresa pamakirasi okutuhwina.
Hazvina kutora nguva refu mudzidzisi weKarate asati asvika kuna Herbert Sr naTania vaine chinangwa chekurenda kuseri kwavo senzvimbo yemakirasi ekarati. Nekudaro, ivo vabereki vakachinja pfungwa uye vakasarudza kunyoresa vana vavo Karate.
Gilbert Anopisa Hupenyu hwepakutanga neUFC:
Weramangwana wekutumira grappler aingova nemakore mana chete paakatanga kudzidziswa muKarate. Zvisinei, kudzidziswa kwake hakuna kugara kwenguva refu.
Makore manomwe gare gare, mumwe wevabereki vaGilbert Burns (baba vake) - vaimhanyisa bhizinesi rekusimudza - aishanda pamotokari yemutengi paakaona vanakomana vake vachida kutamba neKarate gi yavakawana mukati memota.
Gore raive ra1998 uye mhuri yaGilbert Burns yaive isina mari.
Pane kuti apihwe mari yebasa racho, Herbert Sr akabvunza mutengi wacho - uyo akazove murairidzi wejiu-jitsu - kana aizopa vanakomana vake jiu-jitsu yechikoro. Carlos akabvuma ndokupa vakomana vacho mwedzi mitatu pasina muripo.
Gilbert Anopisa Makore Ekutanga muCombat Sports:
Mwedzi mumwe mukati mejiu-jitsu, iyo yeUFC nyeredzi nehama dzake dzaive dzichikwikwidza mumakwikwi emunharaunda uye vakawana mukana wekuchinjisa ku Associacao Oriente (mubatanidzwa weNova União) mushure mekutamba kwaCarlos.
Muna 2007, Gibert akange atove mubhande webhandi-anovimbisa zvekuti vanhu vakatanga kuisa mari muzvaanotarisira ndokumuendesa kuCalifornia kunokwikwidza menduru yeIBJJF.
Yakanga isati yasvika gore ra2011 apo yemitambo yekurwisa yakasvika padanho repamusoro rebasa rake rekutanga paakakunda menduru yegoridhe panguva ye2011 World Brazilian Jiu-Jitsu Championship.
Gilbert Burns Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Paakahwina Mumakwikwi, mikana yakawanda yakauya ikagogodza pamusuwo wake. Gilbert akaita danho rekunyurura mupasi reMMA seanoshamara murwi akamirira kudanwa kuti apinde Yekupedzisira Yekurwira Championship UFC.
Murwi anovimbisa akazopedzisira apinda muUFC muna2014 ndokutanga kuita musi wa26 Chikunguru gore iro mukuhwina kurwisa mutsva wekutsvaga, Andreas Stahl.
Akaenderera mberi kuhwina kumwe kurwa kuviri asati atambura kukundwa kwake kwekutanga mumaoko aRashid Magomedov munaNovember 2015.
Gilbert Burns Biography - Simuka Kukurumbira Nyaya:
Achisimudza kubva paakasiira, murwi wekutumira akaenderera mberi achirwa.
Gilbert aive nemusanganiswa wekuhwina nekukundwa asi zvimwe zvekare zvakakonzera kukwira kwezvinzvimbo zvekukunda mamwe mazita aivimbisa muchikamu chewelterweights.
Achikurumidza kusvika kunguva yekunyora bio yake, zvinyorwa zvake zvehunyanzvi zvekurwira zvinomira 19 3 uye iye anotarisana Kamaru Usman yeiyo Welterweight Championship muna Chikunguru 11 kuUFC 251.
pamwe Jorge Masvidal munguva yemberi. Nekudaro, chero nzira iyo zvinhu zvikaitika kwaari, ivo vese, sezvavanotaura, yaizogara iri nhoroondo.
Ida Hupenyu - Nezve Gilbert Burns Wife Uye Vana:
Pese panorwiwa zita rekuti Bruna, anonyemwerera uye anofunga nezvemunhu mumwe chete. Haisi musikana wake asi hapana mumwe kunze kwemukadzi wake anodikanwa.
Vanga vari pamwe kwenguva yakati rebei. Chokwadi ndechekuti, kwete zvakawanda zvinozivikanwa nezvekuti vaviri vacho vakasangana sei, vakatanga kufambidzana uye vakave murume nemukadzi zviri pamutemo.
Kunyangwe zvakadaro, isu tinoziva kuti Gilbert naBruna vari kunakidzwa neupenyu hunofadza muwanano uye vane vana- vanakomana vaviri pamwechete.
Mazita avo ndiPedro naJosh. Gilbert pasina mubvunzo ari kuvadzidzisa mumitambo yekurwa sezviri pachena mune akawanda Instagram mafoto anoratidza vana muGYM.
Gilbert Anopisa Hupenyu Hwemhuri:
Wese munhu ane imba. Ndiro rinonyanya kukoshesa muhupenyu. Pano, tinokuunzira chokwadi pamusoro paGilbert Burns Vabereki, Vanun'una uye hama.
Nezve Gilbert Burns Baba:
Kutanga, mucherechedzo wemba ndibaba vake Herbert Sr. Ivo baba vevatatu vanozivikanwa kuve vakaita bhizinesi rekukwirisa panguva yehupenyu hwaGilbert hwepakutanga.
Asides kubva kubhizinesi, baba vanotsigira vane chinhu chekuchikoro uye vanonzi vari pedyo nekupedza chikoro chemutemo kubva muna Chikunguru 2020
About Gilbert Anopisa Amai:
Vakuru amai vakaburitsa varwi uye Tania haisi iyo yakasarudzika. Iye pasina mubvunzo ndiye anonyanya kuzivikanwa wevabereki vaGilbert Burns.
Amai vevatatu vaivewo nekunonoka kutanga kudzidza kwehunyanzvi basa sezvo ave padhuze nekupedza chikoro chevanamukoti sepanguva yekunyora.
Nezve Gilbert Burns Vanun'una:
Sezvaunenge uchitoziva, iye ane mukoma pamwe nemunun'una uyo akazova mukuru munzira yavo diki. Mukuru Frederick, iye ndiye NAVY chisimbiso uye bhandi dema mu jiu-jitsu.
Mudiki - Herbert Jr ndiye shasha yepasirose muUFC. Havasi ivo vanun'una vakanaka here?
About Gilbert Burns Vemhuri:
Achifambira mberi kubva kuvabereki vake nevanin'ina, hapana zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pehushe hwake maererano nezvevabereki vake nasekuru vake. Zvimwe chetezvo, hapana marekodhi yababamunini vake, babamunini uye hama dzemumba uye vazukuru vake nanasekuru vake vasati vazivikanwa.
Kure kure nein-net yake yekuita mitambo yekurovedza muviri, murwi ane humwe hunhu hukuru hunosanganisira hwakajeka, hwakangwara, hunoshanda-husina moyo uye hunhu hwevanhu vane chiratidzo chezodiac kenza.
Zvakare, Gilbert ane hungwaru hwepamoyo uye haawanzo kuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwepachivande uye hwepamoyo. Anoda kufamba, kuona mabhaisikopo, kushambira, kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari pakati pezvimwe zvinofarirwa nezvinovaraidza.
Gilbert Anopisa Mararamiro:
Wakanga uchiziva here kuti ane mambure anokosha anenge zviuru zvishanu zvemamiriyoni? Kupa nzizi dzeBurns inokurumidza kukwira mambure kukosha mari inowanikwa kubva kumabhizimusi ekupedzisira pamwe nemari yake yaanowana kubva kuhwina mairi.
Nekuda kweizvozvo, iyo MMA nyeredzi haidi kuputsa mabhangi kuti urarame hupenyu hwoumbozha. Kunyangwe kukosha kweimba yaGilbert muBrazil kusati kuzivikanwa, iye ane mota dzekunze dzinogadzirwa nemazita makuru mumaindasitiri emota.
Gilbert Burns Chokwadi:
Kupeta nyaya yedu yehudiki uye biography chokwadi, isu tinopa zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga taurike chokwadi nezve musanganiswa wekurwa.
Chokwadi # 1 - Chitendero:
Gilbert anga asingataure nezve chinamato chake mumakadhi ekurwira uye mumagariro enhau asi zvisirizvo zvinomufarira kuve muChristu nekuti mumwe wevanakomana vake ane zita reChristu (Josh).
Chokwadi # 2 - Trivia:
Wanga uchiziva here kuti Gilbert anogovera gore rake rekuzvarwa 1986 nevamwe vane mukurumbira vakaita Lady Gaga, Usain Bolt uye Emilia Clarke? Rakanga riri gore rimwe chetero iro Argentina yakahwina Mukombe weNyika wa1986 muMexico. Vaimbi vaive vakakodzera mugore rimwe chetero vanosanganisira Lionel Richie pakati pevamwe.
Chokwadi # 3 - Chikonzero Kunze kweNickname Yake:
Zita raGilbert "Durinho" rakadzokera kumazuva ake ekuyaruka apo iye nehama dzake Herbert naFrederick vakatanga kudzidziswa kuNova Uniao HQ muRio de Janeiro.
Panguva iyoyo mukoma waGilbert mukuru zita remadunhurirwa rekuti "Todo-Duro", zvichireva kuti "Hardman", mukucherechedzwa kwehunhu hwake hwakaoma.
Kuve iri diki vhezheni yemukoma wake, Gilbert vatambi vekambani vakatanga kumudana "Durinho", nzira inosetsa yekureva murume akaoma - se "mudiki murume akaomarara".
Zita rizere Gilbert Burns
Zuva rekuzvarwa 20th zuva July 1986
Nzvimbo yekuzvarirwa Niterói muRio de Janeiro, Brazil.
vabereki Tania (Amai) Herbert Sr (Baba).
Wife Bruna Anopisa
Children Pedro naJosh
zvinhu Kufamba, kuona mafirimu, kushambira, kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Inokosha kukosha $ Miriyoni 5
urefu 5 tsoka, 5 inches.
Profession Akasanganiswa zvemitambo mutsi uye kutumira grappler.
Kuvonga nekuverenga chidimbu ichi chinonakidza uye kutisarudza isu tiri pakati pezvimwe Gilbert Burns 'Biographies kunze uko. Isu tinotenda kuti ikozvino munomuziva uye munomufarira iye kuti ndiani uye nekuti asvika sei kusvika munyika yeMMA.
Pahupenyu hwehucheche, tinozvirumbidza nekuisa zvirinani uye zviripo zvemukati nezve profiles. Kana iwe wakawana chero chinhu chisingaratidzike zvakanaka ndapota ita zvakanaka kukwevera kutarisa kwedu nekutibata nesu kana kusiya komendi.